October | 2017 | Radio Himilo | Page 5
Real Madrid waxay doonaysaa Macalinka Tottenham.
radio himilo October 17, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 45 Views
Muqdisho – Real Madrid ayaan hadda aad u tix-gelinayn wada-hadalka ciyaartoyda Tottenham ee Harry Kane iyo Dele Alli, hayeeshe waxay diiradda saarteen macalinka kooxda Mauricio Pochettino. Kane ayaa si adag loola xiriirinayay Madrid kadib bandhigii wacnaa ee xagaagii hore uu sameeyey – ...
17 October – Maalinta Caalamiga ee Cirib-tirka Faqriga.
radio himilo October 17, 2017	Features, Wararka Leave a comment 40 Views
Muqdisho – Maalinta Caalamiga ee Ciribtirka Faqriga waa munaasabad caalami ah oo sanad kasta 17 October loo dabaal-dego. QM ayaa si rasmi ah u aqoonsatay, hayeeshe abaabulkeeda wuxuu markii ugu horreysay ka hir-galay magaalada Paris ee dalka Faransiiska halkaas oo ...
Qaraxii Zoobe – Wixii Dhacay Mafududeyn.
radio himilo October 16, 2017	Features, Wararka Leave a comment 49 Views
Muqdisho – Dhawaaq kasta oo wali kusoo dhaca dhegahaada ama muuqaal walba oo aad baraha bulshada ka eegto wali waxaa taagan tiiraanyada musiibadii foosha xumeyd ee ka dhacday is-goyska Zoobe Maalintii Sabtida. Taniyo markii ay aafadani dhacday, qof kasta oo ...
Guardiola: “Mabda’eennu wali waa sidiisa.”
radio himilo October 16, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 42 Views
Muqdisho – Pep Guardiola ayaa qirsan inay ku adag tahay inuu qaadaa-dhigo sida xooggan oo uu kooxdiisa City kaga soo saaray bilowga kulamada horyaalka xagaagan bilihii lasoo dhaafay. Macalinkii hore ee Barcelona ayaa warar aan xiisa gelin ay kusoo dhacayeen dhagihiisa ...
Klopp – “Liverpool uguma guuleysanayso horyaalka sida Mourinho inay u ciyaarto.”
radio himilo October 16, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 34 Views
Muqdisho – Jurgen Klopp ayaa difaacay kooxdiisa Liverpool kagadaal barbarihii ay la gashay dhigeeda Manchester United. Kooxda Cas ayaa dadaalkeeda ku mira-dhalin waysay inay soo taabato shabaqa kooxda United-ka oo ay la gashay 0-0 – taas oo 10 dhibcood kasii hoos ...
Keown: “Ozil wuu isaga tagi doonaa Arsenal bisha January.”
radio himilo October 15, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 44 Views
Muqdisho – Mezut Ozil wuu isaga tagi doonaa Arsenal bisha January ee sanadka soo aadan, sida uu yiri Martin Keow. Xiddiga xulka Jarmalka ayaa ku jira sanadkiisa ugu danbeeya heshiiska uu kula joogo Arsenal. Hubaal la’aan ayaa ku jirta mustaqbalka laacibkan, ...
Levy: “Pochettino wuxuu noqonayaa Sir Alex-ka cusub ee Tottenham.”
radio himilo October 15, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 37 Views
Muqdisho – Mauricio Pochettino waxaa lala tirsiinayaa inuu noqonayo Sir Alex Feguson-ka kooxda Tottenham Hotspur, guddoomiyaha naadiga Daniel Levy ayaa sidaas yiri. Macalin reer Argentine wuxuu sanadkiisa afaraad ku sugan yahay waqooyiga England – isaga oo soo leyliyay kooxda Southampton. Labadii sano ee lasoo ...
Neville: “United waa inay bedeshaa qaab-ciyaareedka kulamada waaweyn.”
radio himilo October 15, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 26 Views
Muqdisho – Manchester United waa inay bedeshaa qaab-ciyaareedka ay kula dheesho kooxaha waaweyn haddii ay doonayso inay ku guuleysato horyaalka PL, Gary Neville. Kooxda lagu naanayso Shayaadiinta Cas ayaa xilli ciyaareed fiican kula kowsatay horyaalka PL iyo midka horyaallada Yurub. Waxay ...
Sidee Qofku aqoontiisa si samafal ah ugu celin karaa Bulshadiisa?
radio himilo October 14, 2017	Features, Wararka Leave a comment 46 Views
Muqdisho – Dunida marna mayeelan maalin la wada ladan yahay: mana yeelan maalin la wada dhibtoon yahay. Hayeeshe maalinna way kasii naruuro fiican tahay maalin kale. marka aynu leenahay saaxiibo rumaad, dharaar walba waxay leedahay milgo. Waxaa jira maalmo dhaama ...
Baadari Kenyan oo Muslimay kadibna Kaniisaddiisa ka dhigaya Masjid.
Nairobi – Baadari Kenyan ah ayaa muslimay kana dhigay Kaniisaddiisa Masjid – isaga oo sheegay inuu qaadan waayay sida haweenku ugu soo labistaan Kaniisadda. “Kaniisadayda waa la dhihi jiray Nyalgosi God’s Call Church of East Africa, hayeeshe hadda waxaa lagu ...
Henrikh Mkhitaryan oo u dagaallamaya booskiisa joogtada ah ee Man Utd.
Real Madrid oo dooneysa soo xera-galinta laacibka Alexis Sanchez.
Dembélé oo kasoo bogsanaya dhaawacii soo gaaray.
Tottenham oo albaabka u furtay heshiiska difaaca Man Utd ee Luke Shaw.
© Copyright 2017, All Rights Reserved to Radio Himilo